❤️ Otu esi eme ka ndị na-eso ụzọ Instagram mụbaa : 99 EUR maka awa 24 - Winches Club
Instagram abụrụla ngwa ngwa mgbasa ozi ike maka azụmaahịa. Maka ihe doro anya : 13% nke ndị bi n'ụwa na-eji ya, na 80% n'ime ha na-eso ụlọ ọrụ.
Na ọnụ ọgụgụ nke 4,21% masịrị, mbak na kwuru, Oberlo kwuru na njikọ ndị ahịa esibeghị ike karịa. Ọ na-ewu ewu ugboro iri karịa Facebook, Pinterest na Twitter ọnụ.
Ya mere, Companieslọ ọrụ na-eche echiche n'ihu na-achọ ụzọ ọhụrụ ha ga-esi tinye ndị na-eso ụzọ Instagram ha aka, n'agbanyeghị ihe isi ike. Iji nyere gị aka inweta ihe kachasị mma na atụmatụ azụmaahịa gị na-akwụ ụgwọ ka ị na-echekwa ụzọ ịre ahịa Instagram gị ogologo oge., anyị achịkọtala ndepụta enyemaka nke ndụmọdụ 23 a. Oge erugo ibido emume.
1. Mmelite na-agbanwe agbanwe.
Ụdị ga-arụsi ọrụ ike ma ọ bụrụ na ha chọrọ inweta ndị na-eso ụzọ ọhụrụ na ịbawanye njikọ aka, mana ka ha kwesịrị ịdị na-arụsi ọrụ ike ? Nnyocha na-egosi na otu post ma ọ bụ abụọ kwa ụbọchị dị mma.
2. Kama ikwusa ozi ọma, kesaa akụkọ.
Mgbasa ozi azụmahịa Instagram na-eleghara ọrụ Instagram anya dị ka”graphic n'ike mmụọ nsọ ngwá ọrụ”, onye bu ihe emere ya. Kama ikwusara ndị na-azụ gị ozi ahịa, jiri foto, vidiyo na ederede iji dọta ha.
3. Mepụta aha ika ama ama.
Ndị ọchụnta ego na-agbalị ịkwalite profaịlụ Instagram ha kwesịrị ilekwasị anya na isi ihe atọ : nghọta, iche na agbanwe agbanwe. Ụzọ ngwa ngwa na enweghị atụmatụ agaghị eweta nsonaazụ achọrọ.
4. Jikwaa ihe ịchọ mma na-agbanwe agbanwe n'ofe ndepụta Instagram gị.
Instagram bụ netwọkụ mmekọrịta ama ama maka ịkekọrịta foto na vidiyo n'ihi mkpa ọ na-etinye na ịchọ mma.. N'agbanyeghị eziokwu ahụ na-egbuke egbuke na-egbuke egbuke adịkwaghị na ejiji, Ọdịnaya anya na Instagram agaghị atụfu mkpa ọ dị.
5. Kpebie na hashtags kwesịrị ekwesị iji.
Hashtags ị na-eji na Instagram nwere ike ime ka ọdịiche dị n'etiti ọkwa na-arụ ọrụ dị elu na post na-ejedebe na ala nke ndepụta ndị na-esonụ..
6. Lekwasị anya na ihe onye ọrụ mepụtara.
Ọdịnaya sitere na Instagram bụ ihe dị nsọ nke ire ahịa. A na-emepụta ma kwado ọdịnaya site n'ahịa gị lekwasịrị anya tupu ọ dị ndụ, nke na-enyere aka belata mmefu ahịa mgbe ị na-abawanye ntinye aka ndị ahịa.
7. Chọgharịa usoro vidiyo dị iche iche dị na Instagram iji chọpụta ihe kacha mma maka ika gị.
Uru vidiyo karịrị nnọọ nke foto.
8. Jiri ndepụta okwu mechiri emechi na ngwa ntinye aha mechiri emechi na Instagram.
Dị ka Instagram si kwuo, A na-ege 60% nke akụkọ, ebe a na-ekiri 40% na nkịtị.
9. Instagram reels ga-atụgharị n'azụ ma ọ bụrụ na ị hapụ ya.
Ọ dị mkpa ịghọta ọtụtụ usoro mgbasa ozi na ikpo okwu, n'ihi na 75% nke Instagrammer na-ekwu na ha na-eme ihe “gụnyere saịtị nleta, Google ma ọ bụ gwa enyi ya gbasara ya” mgbe post metụrụ ya aka.
10. Jiri ihe nzacha eziokwu agbakwunyere nke Instagram maka uru gị.
Studio Spark AR nke Instagram na-eme ka ọ dịrị onye ọ bụla mfe ịmepụta ihe nzacha eziokwu agbakwunyere. N'ihe karịrị otu ijeri nlele na ụfọdụ nzacha kacha ukwuu nke Instagram kemgbe ahụ, eziokwu augmented enwetala aka kacha elu n'elu ikpo okwu.
11. Jiri ụdị mgbasa ozi vidiyo nke Instagram.
12. Gifs animated nwere ike ịdị ụtọ ma ọ bụrụ na ahapụ ya.
GIF bụ ngwá ọrụ dị mma maka ndị otu ahịa, n'ihi na ọmụmụ ihe na-egosi na ndị na-azụ ahịa na-enwekarị ike ikiri vidiyo nkeji iri na ise ruo ọgwụgwụ..
13. Mee ka okporo ụzọ webụsaịtị gị dịkwuo elu site na iji ntọala ndị ọrụ Instagram mee ihe.
Ebe Instagram na-enye ohere naanị otu njikọ clickable na bio gị, ọ nwere ike inye aka ịbawanye okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị.
14 Ị nwere ike “imeri” na Instagram na-eji njikarịcha search engine (Seo).
Instagram na SEO nwere ike ọ gaghị adị ka ndị mmekọ eke na nlele mbụ, mana na netwọkụ siri ike taa, ọ dị mkpa na akaụntụ Instagram gị nwere atụmatụ SEO na ebe.
15. Jiri obere mmetụta iji kwalite aha azụmahịa gị
Site na mgbasa ozi influencer Instagram, ọ na-aghọwanye ihe a na-ahụkarị iji ndị isi echiche na ụlọ ọrụ ahụ iji ruo ọtụtụ ndị na-ege ntị ozi azụmahịa.
16. Nye onye na-ese foto Instagram kacha mepụta ụgwọ ọrụ.
Asọmpi bụ ụzọ dị mma iji bulie itinye aka na Instagram gị na-eso.
17. Enwere ike iji Instagram mee ihe dị ka ngwa ahịa iji mee ka ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ debanyere aha na listi email gị dịkwuo elu.
Mgbe a bịara n'ịzụlite mmekọrịta ogologo oge na ndị na-azụ ahịa, email ka bụ ụzọ nzikọrịta ozi kacha amasị. Iji ngwa Instagram nwere ike inyere gị aka inweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ Instagram (ngwa).
18. Jiri Akụkọ Instagram.
Na ndị ọrụ nde 500 kwa ụbọchị, Akụkọ Instagram gbagoro ọsọ ọsọ ruo n'ogo nke ewu ewu n'elu ikpo okwu. Njirimara akụkọ Instagram na-eme ka ụfọdụ chee na ọ ga-emesịa were ọnọdụ isi nri.
19. Tinye njikọ na Akụkọ Instagram gị na profaịlụ gị.
Na mbụ, naanị ndị ọrụ Instagram ekwenyesiri ike nwere ike itinye njikọ ahụ ” Hụkwuo ” na akụkọ ha, ma ugbua, onye ọ bụla nwere akaụntụ ọkachamara ma ọ dịkarịa ala 10,000 na-eso ụzọ nwere ike ime ya.
20. Jiri emoticons mee ihe nke ọma.
Emojis, kpọmkwem, na-enye uru karịa nzikọrịta ozi ederede mgbe ejiri ya na Instagram. N'oge mgbe emoticons juru (ọzọkwa ga-abịa), ọ dị mkpa inwe atụmatụ maka iji ha na-egosipụta àgwà nke azụmahịa gị n'emeghị ka ọ dị egwu.
21. Kwalite akaụntụ Instagram gị na nyiwe mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ.
Kwalite ọwa Instagram gị nye ọtụtụ mmadụ ka enwere ike. Ị nwere ike nweta ya, ọmụmaatụ, gụnyere njikọ na ibe Instagram gị na mmelite ọkwa Facebook.
22. N'ime akwụkwọ ahụ dum, jiri oku mee ihe (Ctas).
Nweta ihe kacha mma na nkwalite Instagram gị, ọ bụrụgodị na a na-ekele ya nke ukwuu. Tinye oku doro anya maka ime ihe na Instagram.
23. Lezienụ anya na posts Instagram gị ama ama wee detuo otu ị ga-esi meziwanye ha.
mụọ ihe “usoro” ka ịbawanye ọnụ ọgụgụ ndị na-eso ụzọ gị na Instagram ma tinye ya na atụmatụ nkwalite gị iji nweta ọtụtụ ndị na-eso ụzọ.
Edemede gara agaOtu esi ebudata vidiyo Instagram na iPhone gị : 3 Ụzọ na ngwa